James Swan oo Warbixin la xiriirta xaalada Soomaaliya u gudbiyay Golaha Ammaanka ee QM | Allbalcad Online
Home WARARKA James Swan oo Warbixin la xiriirta xaalada Soomaaliya u gudbiyay Golaha Ammaanka...
James Swan oo Warbixin la xiriirta xaalada Soomaaliya u gudbiyay Golaha Ammaanka ee QM
Golaha Ammaanka ee Qaramada midoobay ayaa shir xasaasi ah ka yeeshay xaalada dalka Soomaaliya, waxaana Warbixin la xiriirta xaalada siyaasadeed iyo mida amni ee Soomaaliya Golaha uga warbixiyay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha soomaaliya Amb, James Swan oo shirka dhinaca Internet-ka uga qeyb-galay, isaga oo ku sugan Magaalada Muqdisho.
Wakiilka ayaa ka hadlay doorashooyinka qaranka, amniga, deyn cafinta, caqabadaha dhanka bani’aadamnimada, caddaaladda, arrimaha xuquuqda aadanaha, COVID-19 iyo qodobbo kale.
Hoos Ka Akhriso Warbixinta uu Golaha Ammaanka ee QM uu u gudbiyay James Swan..
Mudanayaal & Marwooyin, Xubnaha Sharafta Leh ee Golaha,
Waad ku mahadsantahay fursada aan mar kale kugula socodsiin karo xaalada Soomaaliya.
Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inaan maanta kula hadlo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, mudane Maxamed Xuseen Rooble; iyo sidoo kale Aasaasaha iyo Gudoomiyaha Dhaqdhaqaaqa Sinaanta Jinsiga Soomaaliyeed, Marwo Saynab Xasan; iyo Wakiilka Gaarka ah ee Gudoomiyaha Gudiga Midowga Afrika, saaxiibkey qaaliga ah isla markaana ay wada shaqeeyaan Danjire Francisco Madeira.
Waxaan kulannaa iyadoo Soomaaliya ay wajaheyso go’aanno xasaasi ah: hannaan doorasho oo lagu soo xulayo baarlamaanka iyo madaxweynaha bilaha soo socda; kala guur nabadgelyo si ay Soomaalidu ula wareegaan mas’uuliyadda amniga dhamaadka 2021; iyo mudnaanta degdegga ah ee waxqabadka bani’aadamnimada iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha.
Mudanayaal iyo Marwooyin.
Markii ugu dambeysay ee aan lahadlo Golahan bishii Ogosto, madaxda Soomaalida waxay ka shirayeen sidii ay isugu raaci lahaayeen qorshaha doorashada 2020/21. Bishii Sebtember, waxay ku heshiiyeen qaab doorasho dadban, taasoo soo afjartay ismari waagii siyaasadeed ee u dhaxeeyay Dowladda Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka.
Qaabkii lagu heshiiyey ee codbixinta ayaa si laga xumaado uga gaabiyay shuruudihii dastuuriga ahaa ee doorashada tooska ah ee codbixinta guud ee baarlamaanka. Haddana, heshiisku wuxuu ka tarjumayey is afgarad siyaasadeed iyo mid ballaaran oo Soomaaliyeed. Marka laga soo tago taageerada Madaxweynaha iyo hoggaamiyeyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka, tusaalaha aan tooska ahayn waxaa sidoo kale oggolaaday daneeyayaasha kale ee muhiimka ah ee Soomaaliyeed, oo ay ku jiraan xisbiyada siyaasadeed iyo bulshada rayidka ah, waxaana ansixiyay Baarlamaanka Federaalka.
Horay u socoshada, isafgaradkan siyaasadeed ee balaaran waa in hada la ilaaliyaa runtiina qoto dheer iyadoo heshiiska la fuliyay. Nidaamka lagu heshiiyey waa in loogu dhaqmaa si cadaalad ah, hufan, si guud loo aqbalay iyo qaab nabadeed. Waana inay noqotaa mid ka qaybgal badan oo loo dhan yahay sidii ay ahayd afar sano ka hor. Waxaan soo dhoweyneynaa heshiiska hoggaamiyeyaasha siyaasadeed si loo hubiyo qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 ee kuraasta baarlamaanka waxaanan ku boorrinaynaa in si buuxda loo ixtiraamo ballanqaadkan.
Jadwalka doorashada wuxuu qeexayaa soo xulista xubnaha labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka dhammaadka Diseembar, iyo doorashada Madaxweynaha Federaalka ee Baarlamanka cusub uu yeelanayo Febraayo 2021. Magacaabista hay’adaha maamulka doorashada ayaa dhowr toddobaad dib uga dhacay jadwalka, welina way sii jiraan mawduuca muranka qaar ka mid ah. Sidoo kale waxaa sugaya dhameystirka qorshaha amniga doorashada, si loo hubiyo in doorashada ay u dhacdo mid amaan ah oo xasiloon inta suurtagal ah isla markaana la yareeyo halista ay Al Shabaab ku carqaladeyn karto ama saameyn ku yeelan karto howlaha.
Si loo taageero dadaalladaas ay Soomaalidu horseedka ka tahay, UNSOM waxay qorsheyneysaa inay gacan ka geysato hirgelinta heshiiska doorashada, iyadoo la tixgelinaayo waajibaadkeeda iyo iyadoo lala kaashanayo UNDP, UNSOS iyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah. Waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa dadaallada ku aaddan doorashooyinka guud ee doorashooyinka mustaqbalka. Si taas loo gaaro, waxaan ka codsaneynaa hogaamiyaasha Soomaalida inay si isku mid ah u diyaariyaan khariidad wadata jadwal cad iyo jaangooyooyin si loo hubiyo in doorashada hal qof iyo hal cod ay dhacdo 2024/25.
Mudanayaal & Marwooyin.
Bishii Sebtembar, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu magacaabay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, oo markii dambe magacaabay Golihiisa Wasiirrada. Dowladda cusub waxaa horyaalla howlo culus – ma ahan oo keliya inay dalka ku hagto geeddi-socodka doorashooyinka, laakiin sidoo kale inay raacdo ajandaha dib-u-habeynta ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. UN-ka Soomaaliya waxay diyaar u yihiin inay dowladda ka taageeraan sidii loo horumarin lahaa ahmiyadan qaran.
Waxaan ku amaanayaa hogaamiyaasha Soomaaliyeed sida ay u muujiyeen tanaasul markii ay gaareen heshiis dhexmara Dowlada Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka. Ruuxani waa in hadda la joogteeyaa. Wixii ka dambeeya doorashooyinka, waxaan sidoo kale ku boorrinaynaa horumar dheeraad ah iyada oo loo marayo is-afgarad ku saabsan dib-u-habeynta kale ee dimoqraadiga ah, oo ay ku jiraan geeddi-socodka dib-u-eegista dastuurka, iyo sameynta Guddiga Adeegyada Garsoorka, Guddiga Xuquuqda Aadanaha, iyo Maxkamadda Dastuurka, tusaale ahaan.
Wadahadalka siyaasadeed ayaa sidoo kale fure u ah wax ka qabashada waxyaabaha kale ee mudnaanta leh, oo ay ka mid yihiin howlgalada ka dhanka ah Al Shabaab, dib u habeynta dhaqaalaha iyo amniga, iyo iskaashiga wax looga qabanayo caqabadaha badan ee bini’aadanimo ee dalka soo food saaray. Waxaan ku dhiirigelinaynaa jilayaasha siyaasadeed inay si rasmi ah uga wada hadlaan wadahadalka u dhexeeya madaxda, sida iyadoo loo marayo Madasha Wadatashiga Qaranka ee dhowaan la sameeyay
Si kor loogu qaado wada hadalka noocan oo kale ah, waxaan dhawaanahan bilaabay taxane booqashooyin ah oo aan ku tagayo caasimadaha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, waxaana ku soo biiray SRCC Madeira iyo wakiilo ka socda Midowga Yurub iyo Urur Goboleedka IGAD ee Horumarinta. Waxaan fahansanahay in Raiisel wasaare Rooble uu sidoo kale bilaabay safaro uu ku kala bixinayo gobolada si uu ulakala hadlo hogaamiyaasha gobolada si loo sii wado wada hadalka, waana soo dhaweynayaa hindisahan
Mudanayaal & Marwooyin
Xaaladda amniga ee Soomaaliya ayaa weli ah mid laga walaaco, iyadoo ay si joogto ah u socdaan weerarada Al Shabab, oo weli ah halista koowaad ee amniga Soomaaliya. Dadaalka joogtada ah ee lagu difaacayo dadka Soomaaliyeed iyo hoos u dhigida awooda Al Shabab waa in ay ahaadaan ujeedka ugu weyn ee ciidamada amniga qaranka, iyo sidoo kale AMISOM iyo amniga kale.
Previous articleGuddoonka Golaha Shacabka oo ku biiray Shirka Musharixiinta uga socdo Muqdisho
Next articleFaa Faahino Kasoobaxaya Qaraxyo Ka Dhacay Shabeellaha Hoose